Hagaajinta Aagga Woqooyi
Waxa Dhacday Intii Uu Dhexdhexaadi Karo Waqtiga Shaqada DEI
Aagga dhexdhexaadka ah, sida uu ku qeexay William Bridges, waa waqti u dhexeysa. Buundooyinka, oo ah hogaamiye sare oo ku saabsan maaraynta isbeddelka, wuxuu sharxayaa in kala-guurka ay u baahan yihiin in la sii daayo waxa ka mid ahaa, ujeeddada wakhti aan hubin ee u dhexeeya, oo aqbalaya bilaw cusub. Ka feker sawir farshaxan ah. Si loo xiro gawaarida cusub, farshaxanku waa inuu marka hore ku sii deynayaa guntada gacmaheeda. Aagga dhexdhexaadku waa wakhtiga uu farshaxanku ka duulayo hal xarig oo kale.
Aagga dhexdhexaadku maaha mid aan raaxo u lahayn dadka badankood, ururrada badanaaba waxay ku jiraan culeys weyn si looga fogaado. Laakiin, sida ay jiraan marxalado la saadaalin karo oo murugo leh, sidoo kale waxaa sidoo kale jira marxalado la saadaalin karo oo ah kala-guurka. Khabiirada cilminafsiyeedku waxay barteen in dhammaan heerarka murugada ay muhiim u yihiin. Isla sidaas oo kale waxay ku habboon tahay kala-guurka: waxaa jira dhammaad, aag dhexdhexaad ah, iyo bilow. Ururadu waxay u muuqdaan inay toos u socdaan ilaa hal mar ilaa bilawga soo socda iyo ka boodi wakhti u dhaxeeya waqti isku mid ah, laakiin aagga dhexdhexaadka ah ayaa loo baahan yahay si loogu gudbiyo si dhab ah u qaadista xididka.
"Ururadu waxay u muuqdaan inay toos u socdaan ilaa hal dhamaad ilaa bilawga soo socda waxayna ka boodi doonaan raaxo la'aanta wakhtiga u dhaxeeya, laakiin aagga dhexdhexaadinta waxaa loo baahan yahay in loo gudbiyo asalka dhabta ah." -BANNADETTE CHRISTIANSEN, MADAXWEYNAHA MADAXA MACMIILKA IYO Hawlgallada
Tababaraha hogaaminta Shana Montesol Johnson wuxuu sharaxayaa habkan: "Aagga dhexdhexaadku waa wadnaha isbedelka. Sida marka abuurku yahay dhulka hoostiisa, sugaayo Gagaash, ma muuqato inuu aad u socdo, laakiin waa waqti aad u muhiim ah oo muhiim ah. Tani waa meesha su'aalaha, koritaanka, barashada, samaynta, geesinimada, hal-abuurka, iyo khatarta qaadista. "
Mashruuca McKnight Foundation, waxaan soo galnay aagga dhexdhexaad ah sida shaqadayada si cad loo qeexay ee ku saabsan kartida dhaqanka iyada oo la adeegsanayo Aqoonsiga Horumarinta Dhaqameedka (IDI), oo ku jira jadwal qeexan oo dhamaystiran, dhammaaday. Sagaalka bilood ee u dhexeeya dib u soo noqoshada kuwaas oo ku calaamadiyay dhammaystirka nidaamka barashada IDI ee rasmiga ah iyo soo-saarka cusub ee barashada iyo hirgelinta cusub ee la xidhiidha kala duwanaanta, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada (DEI), waxaan maqalnay faallooyin sida kuwaan:
"Ma sameyn karnaa wax uun?"
"Waqtiga oo dhan ayaan kufaraxsanahay mana jiraan wax dhab ah oo isbedelaya ..."
Madaxweynaha Kate Wolford wuxuu hoggaamiyaa wadahadal ku saabsan DEI kulamadii ugu dambeeyay ee shaqaalaha.
McKnight ee qaabka geeddi-socodka diiradda loo saaray IDI-da si ballaaran oo diiradda loo saaro DEI waxay ahayd wicitaan is-beddel ah oo lagu dhiso nidaamyo iyo dhismayaal si ay u taageeraan isbedelka la doonayo.
Waqtiga u dhexeeya fadhiga ugu dambeeya wuxuu diiradda saarey aqoonta dhaqameed dabayaaqada Juun 2017 si casharka ugu horreeya uu diiradda u saaro gaar ahaan DEI horraantii Abriil 2018 way adagtahay, wax soo saar leh, oo ay ka buuxsantay caddaynta. Intii aan shaqeynay muddadan, xuduudaha shaqadu waa caddayn.
Wax yar ka dib markii dib loo soo celiyay Juun, boqolkiiba 40 mid ka mid ah Shaqaalaha xubinta shaqaalaha McKnight ayaa loo qoondeeyey inay taageeraan shaqada ururka Waalidiinta.
Guulaha kale ee muhiimka ah inta lagu guda jiro aagga dhexdhexaadinta waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Koox-hawleed-kooxeed ayaa diyaarisay a Warbixinta DEI oo leh qoraalka aragtida; qeexitaannada kala duwanaanshaha, sinaanta, iyo ka mid noqoshada macnaha McKnight; iyo ballanqaadka shaqada. Qoraalada muhiimka ah siiyaan qoto dheer iyo macne ahaan qoraalka.
Kulanka guddiga guddiga Nofeembar ee November 2017, guddiga ayaa si wadajir ah u ansixiyay qoraallada DEI.
Madaxa Aasaaska wuxuu ku booriyay dhammaan xubnaha shaqaalaha in ay ku daraan "Jinsiyada iyo ..." Ujeedooyinka DEI ee qorshaha shakhsiga iyo qorshaha kooxda ee 2018.
Shaqaalaha Aasaaska waxay dejiyeen saddex tilmaamo oo aan ugu yeerno "Heshiisyo fudud" si ay gacan uga geysato hagista sida aan u wada shaqeyno:
U gee xukunka garsoorka.
Iskudhin iska hor imaad baaritaan wadaag ah.
Qaado talaabada xigta ee xigta.
Kooxda la-talinta ee DEI waxay wareysi la yeelatay saddex la-taliye oo debedda ah waxayna shaqaaleysiiyeen mid ka mid ah si ay uga caawiyaan inay fahmaan, fududeeyaan, oo ay hagaan wajiga xiga ee shaqada.
Kooxda la-talinta ee DEI waxay bilowday inay adkeyso ujeedada iyo xubnaheeda 'doorarka iyo masuuliyadaha' -waxaa ah kuwa caan ah iyo kuwa ku-meel-gaar ah.
Kulanka shaqaalaha 20-ka November, 2017, kooxda la-talinta ee DEI waxay wadaagaan liiska natiijooyinka ka soo baxa shaqada ururka ee la xidhiidha DEI, iyo kooxo yaryar oo la bixiyay talooyin iyadoo la adeegsanayo habka waxqabadka ee loo yaqaan "What-So What Now" .
Sarkaalka Barnaamijka Sarah Hernandez waxa uu ka hadlayaa DEI iyo sida ay ula xidhiidho doorka aasaasiga ah ee loo yaqaan 'convener'
Marka la eego, aasaaska ayaa abuuray geeddi-socod cusub oo qeexaya doorarka cusub ka dib markii dib-u-noqoshada, laakiin sida Bridges lahaa saadaalin lahaa, waxyaabaha ayaa ku jiray ficil, mana dareemeynin raaxo leh.
Bishii Abriil 2018 aasaaska ayaa bilowday bilowga cusub. Waxaa dib loo soo celiyay wareegitaan la qeexay iyo jadwal ay ku jirto ujeedooyin waxbarasho oo nadiif ah, diiradda saarey shaqada, iyo waqtiyo jadwal ah si loo helo shaqaale buuxa.
Waxaan aamminsannahay inay jiri doonto barasho shakhsiyeed iyo korniin iyo nidaam weyn, siyaasad, iyo habdhismo isbeddel ah si ay u taageeraan qoraalka cusub ee DEI muddada wareegga. Waxaan ognahay in wareeggaasi uu dhamaan doono, uuna marin doono marxalad kale oo adag, mid murugo leh, iyo mid khatar ah oo dhexdhexaad ah kahor bilawga cusub ee socdaalka cusub.
Sinnaanta Waxqabadka: Warbixin Horumarineed oo ka socota Machadka McKnight